Ooridii Aayaha Nolosha! (Sheeko Gaaban)- WQ: Maxamed Muxumed Cabdi (Haykal) – Tusmoonline.com
Ooridii Aayaha Nolosha! (Sheeko Gaaban)- WQ: Maxamed Muxumed Cabdi (Haykal)
Arrimaha Bulshada Dhacdooyinka Wararka	December 20, 2016	314	Like
Shalay markii uu shaqada ka yimid, aad ayuu u daallanaa. Sidoo kale, shantii maalmood ee ka horreysayna, maalin walba isagoo sidaas u daallan ayuu guriga imanayay. Xalay daalkii hayay iyo jewigii uu guriga ugu yimid oo la isku daray awgii, hurdo aad u fiican ayuu seexday. Marwadiisu saaka aroornimadii ayay toostay, isagu se illaa xilli danbe oo barqadii ah wuu hurdaa. Marwadu markii ay kacdayba, waxay hore u gashay hawl maalinle ah oo saacadahaa inta badan u bilaabanta. Waxa hurdadii ka soo kacay laba carruur ah oo ay lammaanuhu dhaleen. Waa wiil iyo gabadh. Isla markii ay carruurtu soo tooseen, ayay marwadu albaabka qolka uu saygeedu hurday soo celisay.
Carruurtii ayay gacanteeda ugu fool-dhacday, ugu cadayday dhar qurux badanna ugu gelisay. Iyada iyo labadeedii carruur ahaa, qolka fadhiga ayay galeen. Waxyar kaddib, quraac ay goor hore ugu sii diyaarisay ayay siisay. Isagu (ninkii), weli wuu hurdaa. Weliba, hurdadu way u macaan tahay. Dhawr jeer ayay marwadu iyadoo shanqadh-tiranaysa qolka hurdada soo gashay. Kolba waxay yara qooraansanaysay, bal in uu saygeedu soo toosay. Kolkolna, inta ay ku dhowaato ayay hubsanaysay in uu bed-qab ku hurdo! Marka ay neeftiisa oo aan khuuro ahayne hurdo fiican ah dhugato, ayay dib uga laabanaysay. Marka la eego sida ay jabaqda uga ilaalinayso, waxa la moodaa in ay ku caawinayso in uu sii hurdo. Wax uu jiifo oo degganaan iyo qalo la’aan u gama’sanaadaba, goor danbe ayuu kacay. Hareeraha ayuu eegay, wuxuu arkay in marwadiisii ay dhinaciisa ka maqan tahay. Saacadda ayuu eegay, waa barqo dheer, qiyaastii tobankii subaxnimo iyo wax la jira. Wuu soo sara fadhiistay dhegahana raariciyay bal in uu maqlo shanqadha xaaskiisa iyo labadiisa carruur ah. Waxyar dabadeed, wuxuu maqlay ooridii iyo labadii carruur ahaa oo qolka fadhiga sawaxankooda oo ciyaar farxadeed lagu ladhay ka baxayo. Wuu sara kacay oo u dhaqaaqay dhanka suuliga amma musqusha. Qacdiiba, indhihiisu waxa ay qabteen biyo diirran, tuwaal/shukumaan, saabuuntii cadayga iyo cadar is dhinac yaalla oo si gaar ah loo sii diyaariyay. Intuu aad u farxay ayuu bilaabay is dhaq’dhaqid iyo cadayasho. Qolkii hurdada ayuu ku laabtay. Kabadhka in uu maryo kala soo baxo ayuu u holladay, intaanu furin ayuu se arkay dhar miiska yar ee sariirta ku xiga loogu sii diyaariyay. Intuu aad markale u farxay, ayuu hawl yaraan ku dhacay maryihii.
Mararkii ay ooridiisu u soo gal galaysay, weliba markii ay ku soo dhowaanaysay ee ay hubinaysay in uu bed qabo, wuu dareensanaa oo la socday, hayeeshee in uu tooso diyaar uma ahayn! Wuu tallaabsaday oo u dhaqaaqay dhankii qolka xaaskiisa iyo carruurtiisu ku jireen. Albaabka ayuu si tartiib ah u riixay. Judhiiba, inantiisii curad ayaa aragtay. “Aabboo” intay si farxad leh u tidhi ayay xaggiisa u soo orodday. Isla ilbidhiqsigiiba, wiilkiisii yaraana waa ku soo orday. Hab ayuu siiyay labadiisii carruur ahaa. Isha ayuu sii laliyay, dabadeedna wuxuu arkay marwadiisii oo dhar aad u qurux badan ku lebbisan, weji farxad leh iyo niyad-samaanina ka muuqato. Intaanu hadlin ayay kelmedo naxariis leh ku salaantay, isagoon weli soo dhaqaaqinna intay kacday dhanka jikada oo qolka ka soo horjeedda u tallaabsatay. Daqiiqad badhkeed wax ka yar, ayay soo laabatay iyadoo sidda anfaco quraac ah oo sameynteeda ay wakhti gaar ah gelisay. Miiska ayay saartay. Shaah, biyo, cabbitaan kale iyo suufkii faraha la iskaga tirayayna way ag dhigtay. Dedaalkaa kooban, haddana qiimaha sarreeya, dhaqsaha iyo sida ay iskaga xil-saarayso ayuu dhugtay. Isagoo taagan, welina aan u soo tallaabsan dhankii miiska, ayuu xasuusta dib u yara celiyay.
Wuxuu maankiisa ka daawaday, markii uu hurday sidii ay jabaqda iyo qaylada carruurtaba uga dhawraysay, sidii ay u hubinaysay in uu bed qabo ee ay khuuradiisa dhegta ugu soo dhoweynaysay, goortay kacday ee ay wax walba u sii diyaarisay, carruurta iyo nafteedaba sida ay u bishay ee u sii qurxisay iyo waliba farxadda ay ku qaabbishay markuu soo kacay. Markale ayuu xasuusta sii dhex maaxay; wuxuu yaqiinsaday, maalin walba goorta uu guriga ka baxayo sida hagar la’aanta ah ee ay uga hawl-gasho cuntadiisa, lebbiskiisa iyo wixii agab uu u baahan yahay in uu goobta shaqada u sii qaato. Isla jeerkii ayuu si qiiro leh u xasuustay, illaa maalintii ay guri wada yeesheen marwadiisu siday ugu heellanayd, ugu qanacsanayd isaga mar walba iyo dedaalkaa saaka u muuqdaa sida uu u yahay mid maalin leh oo ooridiisu u yeellan tahay. Xasuusahan inta uu dhex muquuranayaa kama badna ilbidhiqsiyo, marka la miisaamo se ka culculus buuraha Golis. Isagoo ay ka muuqato shucuur iyo qiiro gooni ah, ayuu si maskaxda ku durugsan u jalleecay ooridiisa. Wejigeeda muxubbo iyo riyaaq ayaa ka muuqda, waa ay taagan tahay, faraqeeda waxa haysta wiilkeedii yaraa, dhankiisa ayay soo eegaysaa, waxaanad mooddaa mawjadda u daaran saygeeda in ay daalacanayso. Midkoodna ma hadlayo way se is dhawrayaan! Dareenkiisa guduhu isagoo ka soo xoog badanaya, indhihiisuna ay ilmo soo godlanayaan, ayuu haddana xasuustay; maalmo badan oo hore u soo maray, una aawanaa sida maanta oo kale, markuu quraacday, lebbistay isna cadriyay in uu bannaanka iskaga baxay oo asxaabtiisa gaarka ah wakhti la soo qaatay. Maalin kasta oo uu sidaas yeelay, marwadiisu ma dhibsan, kama hadlin kamana ay xumaane raalli ayay kaga ahayd. Maantadan lafteeda, waxa u qorshaysan in uu baxo oo asxaabtiisa la kulmo. Badhaadhaha, wanaagga tiro-dhaafay iyo galladaha uu ku qabo ooridiisa ayaa wax walba kala weynaaday. Inta uu is hayn kari waayay, ilmadii naxariistu keentayna ragax ka soo tidhi, ayuu si daacad ah is-xakamayn la’aanna ah u yidhi: xaaskayga qaaliga aheey, xabiibi waan ku jecelahay! Marwadii, inta ay muusootay, muraaqootay, maankeeduna garawsho u siiyay kaalinta ay ninkeeda iyo qoyskeedaba ugu jirto in uu u ogyahay, xiddigaha dushoodana farxadi geysay ayay xaggiisa u dhaqaaqday. Waxa ay ku tidhi…..
FG: waa curis sheekadu, waxa se hubaal ah, qoysaskeenna qaar badan in noloshoodu sidaa u dhisan tahay.